မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Enchanted preview - WaltDisney Production
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ မနေ့က “Enchanted” ဆိုတဲ့ WaltDisney ကထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိတဲ့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖြစ်တယ်.. ဗေဒါတို့ကတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ဆို ၂ခါမခေါ်ရဘူးလေ.. ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ စိတ်ကူးရင်ဇာတ်လမ်းလေးပါပဲ.. ပြောပြအုံးမယ်နော်..
ကာတွန်းကမ္ဘာက အချစ်စစ်ကို ယုံတဲ့ မင်းသမီးလေး “Giselle” နဲ့ မင်းသားလေး “Edward” လက်ထက်မဲ့နေ့မှာ.. မင်းသားလေးရဲ့ မိထွေးစုန်းမကြီးက မင်းသမီးလေးကို wishing well ထဲတွန်းချလိုက်ရာက လူ့ပြည်ခုခေတ် New york ကို ရောက်သွားတာက စတာပေါ့..
လူ့ပြည်အကြောင်း မသိနားမလည်တဲ့ စိတ်ကူးရင်ကမ္ဘာက Giselle ဟာ.. ဒုက္ခတွေတွေ့ပြီးနောက်ဆုံး စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ Robert နဲ့ဆုံပြီး သူ့ apartment မှာ ၁ညနေခွင့်ပေးခဲ့တယ်.. ဘာလို့ လဲဆိုတော့ Robert ကသူ့ကို စိတ်မနှံ့တဲ့ မိန်းကလေးလို့ထင်နေလို့လေ.. နောက်ပြီး fairy tale တွေကို ကြိုက်တဲ့ သူ့သမီးလေးရဲ့ ပူဆာမှုကြောင့်လဲ ပါတာပေါ့… Robert အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့.. divorce lawyer အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မုဆိုးဖို ကလေး၁ယောက် အဖေပေါ့.. fairy tale တွေ.. True love’s first kiss တွေကို အယုံကြည်မရှိတဲ့ သူပေါ့.. အဲ.. ပြီးတော့ သူက Nancy ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ လက်ထက်ခါနီးပြီ။
Giselle ရဲ့ ကာတွန်းတိုင်းပြည်က မင်းသားလေးကလည်း မင်းသမီးလေးကို ကယ်ဖို့ လူ့ပြည်ကိုလိုက်လာလေရဲ့.. စုန်းမကြီးကလည်း သူ့လူယုံကို လွှတ်ပြီး မင်းသမီးလေးကို အဆိပ်ပန်းသီး ကျွေးခိုင်းလိုက်သတဲ့..
ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ အတိုချုံးပြောရရင် စုန်းမကြီးရဲ့ အကြံအောင်ပြီး မင်းသမီးလေး အဆိပ်ပန်းသီးကိုစားလိုက်ပါလေရော.. မင်းသမီးလေးကို ပြန်သတိရစေချင်ရင် ထုံးစံအတိုင်း အချစ်စစ်က နမ်းရမယ်ပေါ့.. ဒါပေမဲ့ ကာတွန်းကမ္ဘာက မင်းသားလေးနမ်းတဲ့ အခါ Giselle တယောက် သတိပြန်မရခဲ့ပါဘူး.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ အတူနေခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွင်းမှာ သံယောဇဉ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့.. Giselle မသိတဲ့ လူ့လောကအကြောင်းတချို့ကို သင်ပေးခဲ့တဲ့ Robert က သူမ မသိလိုက်ချိန်မှာ ချစ်မိလိုက်တဲ့ မင်းသားလေးအစစ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ…
ဒီကားရဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ အားလုံးခန့်မှန်းထားလို့ရမှာပါ.. ဒါပေမဲ့ ကာတွန်းတိုင်းပြည်နဲ့ လူ့ပြည်ရဲ့ကွာခြားချက်တွေ… မင်းသမီးရဲ့ မသိပဲ လုပ်တဲ့ အရာတွေ.. လူ့ပြည်မှာလဲ တခုခုဖြစ်ရင် ကာတွန်းပြည်လိုပဲထင်ပြီး သီချင်း ထထဆိုလို့ အရှက်ကွဲရတာတွေ.. လိုက်ကာတွေကို ဖြဲပြီး အင်္ကျိချုပ်ချုပ်ဝတ်တာတွေ စသည်ဖြင့် ပျော်စရာကောင်းအောင်ရိုက်ထားတဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာ ဇာတ်လမ်းလေးပါ..
မင်းသမီးလူဖြစ်ခါစ စ စတွေ့ချင်းတော့ နဲ နဲ အသက်ကြီးသလိုထင်ရပြီး.. မှန်းထားသလောက်မချောသလိုပဲ ထင်ရပေမဲ့.. သူ့ရဲ့ ကာတွန်းထဲက ဟန် အတိုင်းသရုပ်ဆောင်တတ်မှုဟာလဲ ချီးကျုးစရာပါပဲ.. နောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ မင်းသမီးနဲ့ ခုခေတ်မင်းသားနဲ့ ဟာ အလွန်လိုက်ဖတ်ပြီး ကြည့်ကောင်းလာပါတယ်..
အကြိုက်ဆုံးကတော့.. ကာတွန်းထဲကအတိုင်း ဆိုကြ ကကြနဲ့.. တိရိစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ စကားပြောကြ.. ရိုက်ထားတဲ့ အချက်ကိုပါ.. ပါဝင်တဲ့ သီချင်းအားလုံးလိုလိုလဲ တော်တော်ကောင်းပါတယ်.. လူတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပြီး ကာတွန်းပုံအတိုင်း ရိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်.. အောက်က vedio clip လေးကတော့ မင်းသမီးပန်းခြံထဲမှာ သီချင်းဆိုတာလေးပါ.. “That’s how you know” လို့အမည်ရပါတယ်.. သီချင်းလေးကကောင်းပြီး ပျော်စရာလေးပါ.. မဗေဒါနဲ့ အတူ ဒီသီချင်းလေးကြည့်ရင်း ခဏတာအမောတွေဖြေနိုင်ကြပါစေ…
စာကြွင်း- မင်းသားလေးအတွက်လဲ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ကြပါနဲ့.. Robert ရဲ့ဇနီးလောင်း Nancy နဲ့ မေတ္တာမျှပြီး ကာတွန်းကမ္ဘာမှာ လက်ထက်လိုက်ကြပါတယ်..
Posted by mabaydar at 12:12 AM
အမရေ အမအပြောကောင်းလို့ သဲတောင် ကြည့်ချင်လာပြီ။ ဒီမှာ တင်ရင်ကောင်းမယ်နော်။ အဲဒီ့တော့မှ သွားကြည့်တော့မယ်။ နာမည်သေချာ မှတ်ထားဦးမှ။
ရယ်လည်းရယ်ရတယ်နော်. Central Park ထဲမှာ ကတဲ့အခန်းနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန် ဖုန်းလာတဲ့အခန်းကို အကြိုက်ဆုံးပဲဗျ
နောက်လည်း movie review လေးတွေ ဆက်ရေးပါဦး. မှေျာနေပါမယ်.
1/17/2008 2:27 PM